Xildhibaano beeniyay inay wadaan Mooshin ka dhan ah Raiisal Wasaare Khayre – Balcad.com Teyteyleey
Xubno ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ayaa beeniyay warar maalmahan soo baxaayay oo ku aadan inuu jiro Mooshin ka dhan ah Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Xildhibaanadan oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay Xukuumadda iyo Baarlamaanka inuu ka dhaxeeyo isfahan wanaagsan oo wada shaqeyn ah, ayna rajeynayaan inuu sare u sii kaco isfahankaasi.
Xildhibaan C/laahi Sheekh Ismaaciil oo Baarlamaanka ka tirsan ayaa sheegay wada shaqeynta Baarlamaanka iyo Xukuumadda inuu yahay mid wanaagsan, isaga oo meesha ka saaray wararka la isla dhexmarayo ee ah in Mooshin uu jiro.
“Waxaa la hadal haayaa in Xukuumadda iyo Baarlamaanka mugdi mugdi uu ku dhexjiro arintaasi waxba kama jiraan haddii aan nahay Xildhibaanada wada shaqeyn buuxda ayaan diyaar ula nahay Xukuumadda.” Ayuu yiri Xildhibaan C/laahi Sheekh Ismaaciil.
Xildhibaan Cismaan Daalo oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa dhankiisa sheegay inay rajeynayaan shaqada Baarlamaanka iyo Xukuumadda u dhaxeysa inay noqoto mid sare u kacdo, lagana shaqeeyo danta shacabka.
Kalfadhiga labaad ee Baarlamaanka dalka ayaa Sabtidii waxaa furay Madaxweynaha Somaliya Farmaajo, iyadoo la filaayo in Baarlamaanka ay isugu yimaadaan kulamadooda caadiga ahaa.
The post Xildhibaano beeniyay inay wadaan Mooshin ka dhan ah Raiisal Wasaare Khayre appeared first on Ilwareed Online.